Mashinka u soo baxaanka u baahanta shahaadaha ee shurka
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Security > Taah>Mashiin xirfadda bib
Mashada isticmaalka bibka ee waxey u sii muhiimsan oo uu muhiin dhaqaalaha dhaqaalaha iyo nolosha ee gaar ah. Sidoo kale masimurinta mashinku wuxuu u badbaada qalabka uu shaqeeyaa, laakiin kale, waxaa sidoo kale badbaadada shaqaalaha. Iyo dhinacyada dhibta ah iyo xiriir ah, Mashada guryaha bibka ee la sii fidiyaa waxay ku habboon yihiin urur kasta oo kale, tusaale ahaan mashinka sawr, mashinka korontada, Mashinka ee guriga iyo mashinka saarayaasha iyo xarunta ka baaraandegeeda.
Daryeelka guriga birta ee fidiyaada
Waana xoog uu sare iyo dhinaca ah.
Waxaan badbaadada shaqaalaha.
Waxaan ka reebtaa boodhka iyo xoog leh iyo xoog badan.
I Durable inta nolosha dheer.
Codsiga ee mashada biilka fidiyaada
Mashinka ee shubixinta ee fidiya waxaa looga isticmaalaa caawimaad oo dhan qalabka, tusaale ahaan warqadda mashinka CNC, mashinka saaraha, Mashinka ee korontada, mashinka raaxada iyo mashinka saarada.
Codsiyada guri macnahaysaya
Ka dambe :Chainmail
Sidee uu wakhtiyaasha ee uu uu uu uu uu u yahay.
Waxyaabaha ahLacag la fasayo?Safka gaaban (SWM): dhererka diimalka gaaban ee salka hooska.Toolka waaweyn (LWM): dhererka ee dayaagonalka waaweynkiisu iyo salka hooska.Goobaha gaar ah (SWD)Dadka waawey...
Inta caawimaad ee la fidiyay?
Inta ahLacag la fasayoQaarlo?Safka gaaban (SWM): dhererka diimalka gaaban ee salka hooska.Toolka waaweyn (LWM): dhererka ee dayaagonalka waaweynkiisu iyo salka hooska.Goobaha gaar ah (SWD)Dadka waawey...
Dadka ee lacagta ee fidiyada
Lacagta ee la fidiyaa waa cayiman jidhka birka ah, kaasoo uu uu uu uu uu uu uu uu uu u yahay laba iyo toban jeer. Sidoo kale waxaa lagu yidhaahdaa shabakadda birta fiiriya, shabaalka biyaha ee ku fidi...
Lacagta fidiyaa waxaa loo qaybin karaa?
Lacagta fididka Waa nooc daad bidix iyo midigta lagu qeybin karo. Labadii birooo kale ma aha. Taasu waa ballanadeeda daqada, taas ka yar. AdeegyadaLacag la fasayoWaxaa laga sameysaa daboolka ee la xid...
Tusaale ahaan codsiga daryeelka ee guudka ee fudud
Tusaale ahaan codsiga ahLacag la fasayoDaryeelka ahShabaalka ee la imaanshaha waxaa loo horeystaa isticmaalii biirka ee uu uu uu u sameeyo goob kala duduwan. goobta ah ee hooska birta ah.Daryeelka bar...
Qaarka fiirka biirka ah
Waqtiy hore,Fiirka birta la siirayoInta badan waxaa looga isticmaalay shabakada badbaadada, saleys iyo deeqada, sida deeqada ee barkanka basketbalka iyo goobta guri aynu iskuulka ah. Dadka dambeeyaa D...
Maseysiinta ee baaraandegeeda sharciga ee furada
Caawimaadda iyo quruxda ee la xiriirtaFiirka birta la siirayoSi uu uu u bedelin karaa qalabka iftiinka iyo kulaylka, si uu derbada dibadda uu uu uu uu ka sameeyo dabaylka oo uu uu uu uu uu uu uu uu uu...
Wax ka sameeysaa fiican birka fidiyay?
Dhammaan waxaannu og nahay in fiican birka ee la fidiyay ay tahay boos muhiim ugu muhiim yahay wadanka. Sidoo kale ee ee guriga birta ee birtaas waa xoogsan yahay, waxaana la isticmaali karaa waqti dh...